တှငျနထေိုငျလူမည်မျှ Rostov-on-Don ကော? တစ်နှစ်နေဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 050 000 သူမြို့သားပြည်သူ့အင်အားဒိုင်းနမစ်ပြည်သူ့အင်အား (တထောင်။ သူမြို့သား) ပြည်သူ့အင်အား 1997 နှစ်ပေါင်း 1023.0 1998 နှစ်ပေါင်း 1020.0 1999 1017.3 တစ်နှစ် ...
ဘယ်လာရုစ်အနေဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ဘို့သွားကြဖို့ဘယ်မှာရှိသနည်း သင်ရုံကဲ့သို့ကွယ်ပျောက်မသွားပါလိမ့်မယ်, သင် (ပါမစ်) အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိဘဲ zhitelsto ၏ osnovaniy.A ရဲ့အမြင်ပြုပါရန်မလိုပါပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆန္ဒရှိပေမယ့် ...
မော်စကိုဒါမှမဟုတ်စိန့်ပီတာစဘတ်ပိုကောင်းတဲ့ဟာကဘာလဲ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ၊ လူများ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အမြင်။ ယောက်ျားများ၊ မော်စကိုသည်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ Sun ကဤသို့ပြောလိုက်သည်။ ပေတရုသည်ငါမြင်သောမြို့ (ပြည်နယ်) တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်းနေထိုင်ဘို့ဗြိတိန်။ ကခက်သလား ငါ့ကိုဗြိတိန်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး, သဘောသဘာဝ, ဗီဇာ, အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်များနှင့်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအမျိုးအစားအများအပြားအသစ်ကအမျိုးအစားမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်အကြံပေးချင်ပါတယ်ပေးပါ။ စနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံ category လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ...
ဂျာမနီမှာရုရှားလူနေမှုအဖြစ် ?? အဲဒီမှာနထေိုငျသောသူတို့အားမေးခွန်းတစ်ခုကို။ သာမန်ဘဝကောင်းတစ်ခုအလုပ်တစ်လျောက်ပတ်သောလစာဖြစ်ပါသည်, ငါကိုပြန်မသွားဘဲ, အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိဆွေမျိုးများရှိသည်။ အရမ်းအလိုတခုတည်း ...
အဘယ်အရာကိုလူတွေ Oymyakon အတွက်လုပ်ပေး ??? Kepsee, dogoor! en kepsee! Tuohy ဟုတ်ကဲ့ suoh! ပကတိဘာသာပြန်ချက်: ငါ့ကိုငါ့မိတ်ဆွေသတင်းကိုပြောပြပါ! သငျသညျအကြှနျုပျကိုပြောပြ! အဘယ်အရာကိုမျှ! အေး၏ရုရှားဝင်ရိုးစွန်းအတွက်အအေးဆုံးအရပျ၌အတွက် ...
ငါသည်သင်တို့ကိုဒီလိုအပျကွောငျးဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသွားကြဖို့လိုသလား? အမြဲတမ်းနေထိုင်ဘို့တစ်ဦးမျှသာခညျြးနှီးဆှေးနှေး-Immigrant ဗီဇာ။ Entry နဲ့ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်နိုင်ငံခြားသားများနေထိုင်တပါးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (CAP 105) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အဘယ်သူမျှမ ...
ငါကာဇန်ရုရှားပြောင်းရွှေ့သင့်သလော ရယ်စရာမေးခွန်းတစ်ခုကို, သင်တာတာလူမျိုး Tatarstan သာ Kalmykia Kalmyk တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါဘူး ... သာယူကရိန်းယူကရိန်း, ကဆက်ဆက်မှန်ကန်သော်လည်းမရ ...
ဂျာမနီမှာဘဝက။ အတှေ့အကွုံ 14 နှစ်ပေါင်းအတူ reviews ဗိသုကာရေတိုကာလတွင်သင့်အိမ်, Mini ကိုဟိုတယ်, ပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်း personalize, ဒါကြောင့်ပေါ်မှာ။ N. ။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဗိသုကာ။ အလုပ်တစ်ခုရှာပါ ...
ရုရှားနိုင်ငံ၏မြို့တော်မော်စကို၊ စိန့်ပီတာစဘတ် ... ဟုတ်တယ်၊ ရုရှားကသူတို့ရဲ့သမိုင်းဝင်မြို့တော်တွေပြည့်နေတယ် - Ladoga (862864) - Novgorod (862882) - Kiev (8821243) - Vladimir (12431389) - မော်စကို (13891712) - စိန့်ပီတာစဘတ် / Petrograd (17121918) -
တိုက်ခန်းကိုဝယ်ခြင်းငှါ သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့ဧရိယာ Novosibirsk အတွက် Prompt? အဆိုပါအထက်တန်းလွှာအမြဲရှိခဲ့ခြင်းနှင့် Sovetskaya လမ်းပေါ် Uritskogo သိရသည်။ ငါအရှိဆုံးအဘို့အကြှနျုပျ၏သမီးတို့နှင့်အတူ သွား. ထိုအရပ်၌ Schetinkina အပေါ်နေထိုင်ခဲ့ ...
ဘယ်လောက်ရေနံပေါင်းတင်ပေးပို့ခြင်းသလဲ? ဒါကကျွန်မပို့စ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ site ကိုနီးပါးလုံးဝရုရှားရှိပါတယ်: http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/bookpostandparcel/parcelltariff_0101132။ အခွန် FSUE ရုရှားစာတိုက်နှင့်သီးခြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ပြည်တွင်းအကိုင်းအခက်အဘို့အချောထုပ်များပို့ဘို့အ ...
ဘယ်လိုနီးပါးဂျာမနီမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အဘယ်သူမျှမ။ ဂျာမန်သံရုံး site ပေါ်တွင်ဟောငျးကိုဖတ်ပါ။ ဂျာမနီ၌နေထိုင်အတူ 1.brak (မသေချာပေါက်ဂျာမန်), မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ဂျာမန်ပြည်တွင်းစစ်သည်ဆိုပါက ...
ရုရှား၌အဘယ်အရာကိုမြို့အတွက်အိုးအိမ်နှင့်အစားအစာအပေါ်နိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းများ? Kingisepp ။ Go နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်, ဒီစတိုးနီးယားနှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်မြို့ရွာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အိုင်ဗင်စီးတီး, အရာ ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသက်တာကို။ Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်၏ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ပါလဲ? LA ကနေအိမ်၌ရှိသကဲ့သို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားရေိက roznyatsya အတွက်ဗဟိုကနေစျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းပေါ်တွင်လူဦးရေ platezhestposobnosti များ၏အဆင့်တွင် ...
Rostov-on-Don အတွက်မဆိုလူဦးရေ? 1mln ကျော်ရူးသွပ်။ လူ့ကြီးထွား # 769; In-On-ဒွန် # 769; တောင်ပိုင်းရုရှားတွင်မြို့တမြို့, အ Rostov ဒေသများ၏အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာန။ အဆိုပါကို C 13 မေလ 2000, တောင်ပိုင်းဖက်ဒရယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာန ... ။
ငါအကြံပေးဘယ်မှာနှင့်မည်သို့ဥရောပတိုက်တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ဘို့ထားခဲ့ဖို့လိုသလား? Razmataz 6.9Kbolee လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါဘယ်မှာပြောင်းရွေ့တဲ့သူမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်။ ဤတွင်နိုင်ငံများစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: တရုတ်, နယူးဇီလန်, လတ်ဗီးယား, အမေရိကန်, ရုစ် (မ ...
အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများအမြဲတမ်းနေထိုင်ဘို့ကနေဒါမှရုရှားထံမှရွှေ့ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။ လူများကအပြစ်တင်ရန်မလမ်းတစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းထက်ပိုလွယ်မယ့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အနည်းဆုံး5စျေးနှုန်းအရစ်ကျစိုးရိမ်ထိတ်လန်ကြဘူး ...
သောတိုင်းပြည်အသက်ရှင်ဖို့ပိုကောင်းပါသလဲ ရုရှားလူကိုလူမှုရေးအရနှင့်စီးပွားရေးအရတှငျနထေိုငျ lushe ဘယ်မှာရှိသနည်း အများကြီးပိုလွယ် peehat? သူကမွေးဖွားခဲ့သည်ရှိရာအသက်ရှင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ။ သို့သော်လျှင်ကံကြမ္မာသည်အခြားထဲမှာပစ်ချလိုက်ပါတယ် ...
ရုရှားနိုင်ငံသားဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံသားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဖြစ်နိုင်ပါသလား၊ ဒါပေမယ့်ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်စရာမလိုဘဲအဲဒီမှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်လို့ရလား။ ငါနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအကြောင်းကိုမသိရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ရုရှားလူမျိုးတွေ Minsk မှာပန်းချီကားတွေ ၀ ယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်က ...
53 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,316 စက္ကန့်ကျော် Generate ။